The 20 best it services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
360 Mobile Sales & Services Centre
👍👥👨‍💻👨‍💼အတ်မင်တို့ရဲ့ 360 Mobile ကတော့ဖြင့် “၀ယ်ယူသူ စိတ်ချမ်းသာရေး ၊ အသုံးပြုမှုအဆင်ပြေစေရေး” ဆိုသောဆောင်ပုဒ် ကိုလက်ကိုင်ထားပြီး ၀ယ်ယူသူများအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
🎁🛍📲360 Mobile တွင် လူကြီးမင်းတို့ ၀ယ်ယူအားပေးသော Handset များ အတွက် တန်ဖိုးရှိ ၊ အသုံးဝင်သော လက်ဆောင်ပစ္စ္စ္စ္စ္စ္စ္စ္စ္စ္စ္စည်းများ ပေးအပ်ထားပါသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် Handset ၀ယ်ယူရုံဖြင့် + + + များအတွက် “ ငွေကြေး ထပ်မံကုန်ကျစရာ” မလိုဘဲ အဆင့်သင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
💻🖥⌨🆓လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် 360 Mobile မှ ၀ယ်ယူထားသော Handset များ အသုံးပြုနေသမျှ ကာလပတ်လုံး “Software ပိုင်းဆိုင်ရာ
AiKON သည် [ ၂၀၀၈ ] ခုနှစ်ကတည်းက ...
✦✦ Apple သီးသန့် Sales & Service Center ✦✦
အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Apple ထုတ် iPhone, iPad များနှင့် Mac ကွန်ပြူတာအမျိုးမျိုးကို ...
➫ အာမခံချက်အပြည့်ဖြင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ ရောင်းချပေးခြင်း
➫ ပျက်စီးမှု နှင့် Errors အမျိုးမျိုးအား ပြင်ဆင်ဖြေရှင်းပေးခြင်း
➫ Apple နည်းပညာအပေါ်တွင် Customers များ၏လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
ဒေတာ plan ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ အင်တာနက်ကောင်းကောင်းသုံးချင်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင် ananda က အများကြီးကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။။
Free SIM ကဒ် နဲ့routerအပြင် ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အင်တာနက်ကို ရှယ်သုံးနိုင်မှာလေ။ ဈေးနှုန်းက ၉၀၀၀၀ကျပ်ပဲ ကျသင့်တဲ့အပြင် အခုဆိုရင် ရန်ကုန်မှာလည်း ဝယ်လို့ရနေပြီဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေသွားပြီ။ ဆိုတော့ ကောင်းမွန်တဲ့အင်တာနက်ကို မနားတမ်းသုံးနိုင်ဖို့ ananda ရှိနေဖို့ လိုပြီပေါ့။
Computer & Laptop Repair Home Service
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Computer error network error များကို အိ်​မ်​အရောက်​ services ဝန်​ဆောင်​မှုပေးနေပါပြီခင်​မျာ
(မိမိ၏ တည်နေရာကို Google Maps ကနေဖော်ပြပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ILAB - Hledan
မိတ်ဆွေရဲ့ အနားမှာ အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတဲ့ Apple Decives လေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးက မိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှု ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာမို့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အမြဲဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ် ....
မိတ်ဆွေရဲ့ Apple Devices လေးတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့
#iLABလှည်းတန်း က အမြဲကူညီဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်
iOS Mobile Sales & Professional Services
iOS Mobile Sale Exchange & Professional Service တွင်
🍎 Apple Device များအား 🍎
🍎 Version Update & Restore လုပ်ခြင်း
🍎 Applicationn, HD Game & မြန်မာ Font ထည့်သွင်းပေးခြင်း
🍎 Network Lock & iCloud Lock ဖြည်ပေးခြင်း
🍎 Apple id Account ဖွင့်ပေးခြင်း ***ကျွန်တော်တို့ ဖွင့်ပေးထားသော id နှင့် iCloud ကျခဲ့ပါက Free Unlock လုပ်ပေးပါမည်***
🍎 Hardware Service အနေဖြင့် itune Error -1 -9 Blue Screen
Touch iC error , Back Light error , Finger Print Error etc .. အမျိုးမျိုးတို့ ကို
ချစ် customers တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့
New Year Promotion အစီစဉ်ကြီးစပြီနော်
နှစ်သစ်ကူးအထူး Special Promotionအနေဖြင့်
Smart Phone -- ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ယူသူတိုင်း
❤️GYM SPORT BAG❤️
gym sport bag ဆိုတော့အခုလိုဆောင်းရာသီမှာ
ဒါအပြင် company အလိုက် promotion တွေလဲ တစ်ပွေ့ကြီးရအုံးမှာနော်😎😎😎
တစ်ခါပြင်ဖူးတာနဲ့ တစ်သက်တာလုံးရမယ့် Discount
iSure မှာ တစ်ကြိမ်တခါတည်းပဲဖြစ်ဖြစ် သင့် iPhone ကိုပြင်ဖူးပါသလား။
တစ်ကြိမ်ပြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သင့် iPhone ဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နောက်နောင် ပြုပြင်ဖို့ ဖြစ်လာပြန်ပြီဆိုရင်တော့ iSure မှ 10% Discount ပေးသွားပါမည်။
ဒီ Discount အစီအစဉ် iSure ၏ မိတ်ဆွေဟောင်းများကို လေးစားတန်ဘိုးထားသောအားဖြင့် ပြုလုပ်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
iSure တွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ဖူးသော iPhone များ နောင်အခါ တစ်စုံတစ်ရာပြုပြင်ဖို့ ကြုံလာလျှင် ယခု discount ခံစားခွင့်ကို မည်သူမဆို၊ မည်သည့် iPhone အမျိုးအစားကိုမဆို ခံနိုင်စားနိုင်ပါမည်။
ယခု 10% discount
ကျွန်တော်တို့ ITCARE Laptop/Notebook Service Centre မှာကတော့ မိတ်ဆွေများ လိုအပ်လျှက်ရှိသော အောက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုများကို မြန်ဆန်သောဝန်ဆောင်မှု၊ အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်း၊ တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် အရည်အသွေးစိတ်ချရသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အချိန်တိုအတွင်း ပြုပြင်ဖြေရှင်းပေးနေပါပီ။
LCD အစင်းထခြင်း/ LCD လွတ်ခြင်း/ LCD အလင်းပေါက်ခြင်း
LCD ရုပ်ပုံများ မပီသခြင်း/ LCD မလာခြင်း/ LCD ကွဲအက်ခြင်း
Keyboard လက်ကွက်များ နှိပ်မရခြင်း၊ လက်ကွက် Key များညှိနေခြင်း
🌷မင်္ဂလာရှိ့သောနေ့သစ်လေးများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ 🌷
အချိန်ခဏလေးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှူတွေ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် mCare (Apple Authorized Service Provider)မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ...
iPhone Official Warranty Stock တွေ မှန်ကွဲလို့ ပြန်လဲပြီးနောက် Apple Warranty ပျက်မှာ စိုးရိမ်နေပါသလား?
mCare (Apple Authorized Service Provider) တွင် Official Display Replacement များ စတင် ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ Genuine Parts များနှင့် ကျွမ်းကျင်သော Apple-Certified Technicians များဖြင့် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် မိမိ Device များ၏ Quality ပိုင်းနှင့် Warranty ပိုင်းတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါ... အချိန် ၁
MHP Computer Service
အခြားသော Computer Services များထက် 30% လျော့ပေးသည့်အပြင် Service Warranty လည်း ပေးထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အရောက်လိုက်လံ ပြုပြင်ပေးမှုကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် လိုအပ်သော Software များကို စိတ်တ်ိုင်းကျ ထည့်သွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
MMA&apos;S - Phone Service Center
သင် မန္တလေးကလား ။ ဖုန်းဆားဗစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် MMAS ကိုသာသတိရလိုက်ပါ။ ဖုန်းတွေ ဘယ်လိုပဲပျက်စီးလာလာ .... မူလအတိုင်းပြန်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနေပါတယ်နော်။
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းလေးဘာကြောင့်ပဲပျက်စီးသွားပါစေအကောင်းပကတိအတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ MMAS ကိုသာအမြန်ဆုံးလှမ်းခဲ့လိုက်ပါ။ One-Stop Service ဖြင့်နေ့ချင်းပြီး ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဖုန်းတစ်လုံးတွင်ဖြစ်တတ်သော Software/Hardware error မျိုးစုံကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
Mobile Brother Service
Firware Update,FRP,Mi Account, Other Fix စသည်တို့ကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ🙂
HD Movies, MP3 တို့ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ
Myanmar Country ၏ Customers များ အနေနဲ့ websites များ၊ email services များ ၊ application services များမှာ SSL certificates များ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ရင် free SSL certificate ကို ၃လ တစ်ချိန် Renew လုပ်ပေးရုံပဲ နဲ့ အချိန်အကန့်အသက်မရှိ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar GT Broadband Co.,Ltd
WE LINK Fiber Internet ရဲ့ Package (4) မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...
WE LINK Fiber အိမ်သုံး Internet ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ကြမယ့် မိတ်ဆွေတို့အတွက် ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ Package အသေးစိတ်လေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
👑(Crown Package) 12 Months Package
C1 >> 31,500 x 12 >> 15 Mbps
C2 >> 59,050 x 12 >> 30 Mbps
C3 >> 84,000 x 12 >> 50 Mbps
C4 >> 123,900 x 12 >> 75 Mbps
C5 >> 223,650 x 12 >> 100 Mbps
(၁၂ လကြိုပေး၊ တပ်ဆင်ခ အခမဲ့၊ ခေါင်းအုံးအနှိပ်စက် သို့ WIFI CCTV Camera တစ်လုံး လက်ဆောင်)
💍(Diamond Package)6Months Package
D1 >> 31,500 x6>> 12 Mbps
D2 >> 59,050 x6>> 25 Mbps
D3 >> 84,000 x6>> 40
🏠🏠Smart Mobile Services မှကြိုဆိုပါတယ်။
👷Firmware Update, Repair အစရှိသည်တို့ပြုပြင်ပေးခြင်း
📱 မိမိဖုန်းအသုံးပြုရတာ လေးနေတာဖြစ်ဖြစ် ၊ Logo မှာပဲရပ်နေတာဖြစ်ဖြစ် ၊ Virus ကိုက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် Firmware ပြန်တင်ချင်ပါက Service ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Software Version Update ပြုလုပ်လိုပါကလဲပြုလုပ်ပေးပါသည်.ios,android,အစရှိသည့် Os သုံးဖုန်းတွေကို Service ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
💰 Firmware Repair of Upgrade - 3000/5000/8000 ကျပ်
👷 Root,Myanmar Zawgyi Font များ ထည့်သွင်းပေးခြင်း
⌨ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဖုန်းတွေ Zawgyi Font ထည့်သွင်းလိုခြင်း Root
⚠မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ လူကြီးမင်းတို့၏ Laptop များကို
(6 months Or 1 years)အချိန်ထိ အသုံးပြုပြီးပြီဆိုရင်တော့
Heat Thermal Paste များခြောက်သွေ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး Chip set များ Heat တက်လာခြင်းကြောင့် Chip set များ
ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ၊ ပုံပါအတိုင်း Motherboard Shock ဖြစ်ခြင်းများနှင့် High Voltage Errors များလဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်Hardware Cleaning ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်
Power Shock* ဖြစ်ခြင်း၊ Power သေသွားခြင်း၊ Powerဖွင့်ရင် Screen မှာ ဘာမှပေါ်မလာတော့ဘူး
No Display Error* ၊ အသုံးမပြုတာ ကြာလို့ Power ဖွင့်မရတော့ခြင်း၊ အသုံးပြုနေရင်း
Technology Solution Co. LTD
လူကြီးမင်းတို့ Laptop accessories ​တွေလိုအပ်​​နေပီဆိုရင်​​တော့ Technology Solution ကိုသတိရလိုက်​ပါ​နော်​.
Model အစုံ Brand အစုံဝယ်​ယူလို့ရ​နေပါပီ​နော်​..
လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ Yangon Computer Services မှအောက်ပါပြဿနာများအား ရုံးအရောက်၊ အိမ်အရောက် လမ်းစရိတ်မယူဘဲ လာရောက်ဖြေရှင်းပေးနေပါသည်။
အိုင်တီဒေါက်တာ ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ် စင်တာ
✌️✌️✌️ကွန်ပျုတာ နဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအတွက် အိုင်တီဒေါက်တာ အိမ်အရောက် ကွန်ပျုတာပြုပြင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကို အခမဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းဆက်လိုက်ရုံဖြင့် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း နေ့ချင်းပြီး အိမ်/ရုံးအရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။✌️✌️✌️
🙂 Computer Services
Windows တင်လိုလျှင်၊ Software အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းလိုလျှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ် Games များ ထည့်သွင်းလိုလျှင်၊ Virus သတ်လိုလျှင်၊ Virus Update ပြုလုပ်လိုလျှင်၊ Network ချိတ်လိုလျှင်၊ Data Sharing/Printer Sharing များအတွက် တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလိုလျှင်၊ ဖုန်းဖြင့် ကွန်ပျုတာ နှင့် Laptop များတွင် အင်တာနက်